အာဏာအရှိဆုံး Steroid တစ်မျိုး Mibolerone (ပေါက် Check) အွန်လိုင်း | AASraw
အာဏာအရှိဆုံး Steroid တစ်မျိုး Mibolerone (ပေါက် Check) အွန်လိုင်း
/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/အာဏာအရှိဆုံး Steroid တစ်မျိုး Mibolerone (ပေါက် Check) အွန်လိုင်း
အပေါ် Posted 07 / 19 / 2018 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
Mibolerone အကြောင်းကိုအရာအားလုံး (ပေါက် Check)
1.What Mibolerone (ပေါက် Check) လား?
4.Mibolerone (drop Check) သက်ရောက်မှုများ
5 ။ Mibolerone တစ်ဝက်ဘဝ
7 ။ Mibolerone သောက်သုံးသော
10.Buy Mibolerone အွန်လိုင်း
I.Mibolerone အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်:
အမည်: Mibolerone အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 168-171 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
1 ။ Mibolerone (ပေါက် Check) ဆိုတာဘာလဲ
Miboleroneထို့အပြင် dimethylnortestosterone (DMNT) အဖြစ်လူသိများ (ပေါက်, CAS No.3704-9-4 စစ်ဆေး), ပထမဦးဆုံး 1963 အတွက်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ တစ်တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေး drug.It အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးခွေး (mibolerone ခွေး) တွင် estrus (အပူ) ၏ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အကာပါးစပ်ကုသမှုအဖြစ်အထူးညွှန်ပြခဲ့ပါတယ်အဖြစ် Mibolerone အသုံးပြုမှုများအတွက်, အမှတ်တံဆိပ်အမည်အားစစ်ဆေးမှု Drop နှင့် Matenon နှင့်အတူ Upjohn အားဖြင့်စျေးကွက်ခဲ့သည်။
Mibolerone တစ်တိရိစ္ဆာန်ဆရာတန်းဖြစ်ပါသည် ဟို steroid တစ်မျိုး သောအမှတ်တံဆိပ်အမည်အားစစ်ဆေးမှု Drop အောက်မှာနောက်ပိုင်းတွင်စစ်ဆေးမှု Medical ခွေးစားနပ်ရိက္ခာ (mibolerone ခွေး) အဖြစ် Upjohn အားဖြင့် 1960 ရဲ့ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဒီ Steroid တစ်မျိုး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကိုယ်ဝန်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက်အမျိုးသမီးခွေး (mibolerone ခွေး) ၏ရာသီစက်ဝန်းနှောင့်အယှက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အများအပြားဟို Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းနှင့်ဝသကဲ့သို့, ဤတိရိစ္ဆာန်ဆရာတန်းလည်းပါဝင်သည်, ကအားကစားသမားများနှင့်ကာယဗလတစ်ဦးကိုအသုံးပြုခြင်း (mibolerone ကာယဗလ) တွေ့စတင်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ရှည်လျားမဟုတ်ခဲ့ပေ။
အမည် Mibolerone, DMNT
brand name Drop Check, Matenon, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွေးစားနပ်ရိက္ခာ Check
အရည်ပျော်မှတ် 168-171 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင်ခြင်း Temp ရေခဲသေတ္တာ
mibolerone ကာယဗလအသုံးပြုမှုအကြောင်း, mibolerone (ပေါက် Check) အစဉ်အဆက်ကိုဖန်ဆင်းအာဏာအရှိဆုံး steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစအစဉ်အဆက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဖန်ဆင်းတော်မူသောအများဆုံးပြဿနာ steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုမကြာခဏအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောကာယဗလသို့မဟုတ်အားကစားသမားအသုံးပြုသောတစ် Steroid တစ်မျိုးမဟုတ်ပေ။ သငျသညျအမြားဆုံးက၎င်း၏အသုံးပြုမှုကို Pre-ရန်ပွဲသို့မဟုတ်အလေးမအားကစားပြိုင်ပွဲကန့်သတ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ တချို့ကကာယဗလ Pre-ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအပိုတွန်းအားပေးဘို့နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းဒါမှမဟုတ်ချွတ်-ရာသီအတွက်ကူညီရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အလွန်ဘုံကာယဗလ Steroid တစ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ဆက်လုပ် (ပေါက် Check) ဒီအာဏာအရှိဆုံး Steroid တစ်မျိုး mibolerone အကြောင်းပိုမို undertand ပါလိမ့်မယ်။
2 ။ Mibolerone ဒြပ်ပေါင်းများကိုဆေးဝါး
အဘယ်မှာရှိ Mibolerone ကနေပါသနည်း Mibolerone (drop Check) အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်, Mibolerone ပထမဦးဆုံး Upjohn လို့ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီအားဖြင့် 1960s အတွက်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ VET-grade ကိုဟိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချိန်ကာလအတွင်းကလို့ခေါ်တဲ့မူရင်းအမည်ဖြင့်ရှိခဲ့ drop Checkဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်: Medical ခွေးစားနပ်ရိက္ခာ (mibolerone ခွေး) ကိုစစ်ဆေးပါ။ ဒီ Steroid တစ်မျိုးတီထွင်ခဲ့သည်မူရင်းအကြောင်းပြချက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတဲ့ကနေအမျိုးသမီးခွေးတားဆီးဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာအမျိုးသမီးခွေး၏ရာသီစက်ဝန်းကိုရပ်တန့်ဖို့အထူးအလုပ်လုပ်ခဲ့, ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အတော်လေးစာသားခွေးတစ်ကောင်ကိုကူညီပေးနေ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူဒီဇိုင်းထုတ်ကုန်နေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်တဦးတည်းရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူအများအပြားမူးယစ်ဆေး, လူ့သတ္တဝါ, အားကစားသမားမြားနှငျ့ကာယဗလ၏နယ်ပယ်တွင်အထူးသူတို့နှင့်အတူအဖြစ်ကအခြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
mibolerone အောင်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်း (drop Check), mibolerone အခြားကျော်ကြားသောအသုံး steroids Nandrolone ဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Mibolerone တစ်ဦးပါးစပ်ဟိုအန်ဒရိုဂျင်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အခြားလူကြိုက်များ Steroid တစ်မျိုး, Nandrolone မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်၏တစ်ဦးထံမှပြောင်းလဲဖြစ်ပါသည် Nandrolone။ check ပေါက်ရိုးရှင်းစွာ Nandrolone ဟော်မုန်း၏ 7th နှင့် 17th အနေအထားတစ်ခုအပိုဆောင်း methyl အုပ်စုတစ်စုထည့်သွင်းအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေကြသည်။ အဆိုပါ 7th အနေအထားမှာဒီကဆက်ပြောသည်အုပ်စုတစ်စုက၎င်း၏အန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကအများကြီးပိုအစွမ်းထက်သောကြောင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းမှ 5-alpha-reductase အင်ဇိုင်းကာကွယ်ပေးသည်။ အဆိုပါ 17th အနေအထားဖို့နောက်ထပ်အုပ်စုတစုလည်းပါးစပ်စားသုံးမိစဉ်အတွင်းပျက်စီးခံရခြင်းမှဟော်မုန်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ဒါနည်းပညာပိုင်း, တက C17-alpha-alkylated ဟို Steroid တစ်မျိုးစဉ်းစားပါတယ်။
ရုံဤသူင, itty-bitty အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူက Nandrolone ဟော်မုန်းစူပါအစွမ်းထက်နှင့်စူပါအစွမ်းထက်စေသည်။ ဒါဟာစာသား Upjohn အမှန်တကယ်စစ်ဆေးမှုစစ်သွေးကြွကပြောပါတယ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ခြောက်ကြိမ် testosterone ဟော်မုန်းထက်ခွန်အားကြီးနှင့်တစ်ဦးအန်ဒရိုဂျင်ဒြပ်ပေါင်းများနီးပါးသုံးကြိမ်အဖြစ်အစွမ်းထက်ကြောင်းကို, ဤမျှလောက်ဒါအစဉ်အမြဲ created အာဏာအရှိဆုံး Steroid တစ်မျိုးအန်ဒရိုဂျင်၏တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သည်။ function တစ်ခုကိုအဖြစ်ကောင်းစွာသူတို့အားအရိုအသေအတွက်အများကြီးပိုပြီးအစွမ်းထက်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
3 ။ Mibolerone ကာယဗလအသုံးပြုမှု
Mibolerone အားလုံးယှဉ်ပြိုင်သောနေ့၌ကျူးကျော်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်၏ရည်ရွယ်ချက်, ကာယဗလ, ပါဝါ lifters ခွန်အားအားကစားသမားများနှင့်တိုက်လေယာဉ်များကအသုံးပြုသည်။ ရုံ 30 မိနစ်ယှဉ်ပြိုင်မှုမပြုမီအသုံးပြုသောအခါ, Mibolerone (ပေါက် Check) ထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။ အသုံးပြုသူတိုးပွားလာကျူးကျော်, အာရုံနှင့်ယှဉ်ပြိုင် drive ကိုတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။ ဒီ Steroid တစ်မျိုးကိုမဆိုတိုက်ရိုက်စိတ်ကြွဆေးဆံ့မခံပါဘူးသော်လည်းအန်ဒရိုဂျင် Overload တစ်ဦးစီကတဆင့် CNS (ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်) အပေါ်အလွန်သိသာအရေးယူဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကြွက်သားအကျိုးအမြတ်ဒီမူးယစ်ဆေးနှင့်အတူ unnoticeable ဖြစ်သကဲ့သို့ဤသည်, ဒီမူးယစ်ဆေးအားကစားသမားအသုံးပြုတစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Mibolerone ဖွဲ့စည်းပုံ nandrolone မှဆင်းသက်လာကာပါးစပ်ဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အေးဂျင့်ကိုသိသိသာသာပိုပြီးအစွမ်းထက်သည်၎င်း၏ Non-methyl မိဘထက်တစ်ဦးဟိုနှင့်အန်ဒရိုဂျင်အေးဂျင့်အဖြစ်, အထူးသ 7,17-dimethylated nandrolone ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်တွေ mibolerone အစဉ်အဆက်ကိုဖန်ဆင်းအာဏာအရှိဆုံး steorid တဦးအဖြစ်ကာယဗလအကြားတစ်ဦးဂုဏ်သတင်းရရှိထားပြီးပါပြီ။ ဒါဟာမိုက်ခရိုဂရမ်အတွက်ထိရောက်သောတစ်ခုသာရွေးချယ်ထားသောစီးပွားဖြစ်အနည်းငယ် Steroid တစ်မျိုးထုတ်ကုန်များ၏တဦးတည်းဖြစ်သကဲ့သို့, တစ်ဦးနည်းပညာဆိုင်ရာသဘောမှန်ကန်မီလီဂရမ်မဟုတ်, ပမာဏသည်။ စံတိရိစ္ဆာန် assay စဉ်အတွင်း mibolerone နှုတ်ပေးထားသည့်အခါ 41 ကြိမ် methyltestosterone ၏ဟိုလှုပ်ရှားမှုရှိသည်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဆနျ့ကငျြ, ကသာ 18 ကြိမ်အန်ဒရိုဂျင်လှုပ်ရှားမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးဂုဏ်သတ္တိများပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီအေးဂျင့်နှင့်အတူအသံထွက်ကြသည်ဖြစ်သော်လည်း, က (ကဆွေမျိုးအသိမှာ) တစ်ဦးအဓိကအားဟိုဇာတ်ကောင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ အီစရိုဂျင်နှင့် progestational ဂုဏ်သတ္တိများသည်လည်းအလွန်သို့သော်ဒီမူးယစ်ဆေးနှင့်အတူအသံထွက်ကြသည်။ အားကစားသမားများထဲတွင်ကြောင့်အများဆုံးသင်တန်းအဆင့် bulking စဉ်အတွင်းလျှောက်ထားသည်, သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်ယှဉ်ပြိုင်မှုမပြုမီကျူးကျော်လှုံ့ဆော်ရန်။
Mibolerone မကြာခဏအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောကာယဗလသို့မဟုတ်အားကစားသမားအသုံးပြုသောတစ် Steroid တစ်မျိုးမဟုတ်ပေ။
4 ။ Mibolerone (drop Check) သက်ရောက်မှုများ
တစ်ဦးသံသယမရှိဘဲ, Mibolerone (drop Check) တစ်ဦးလူကြိုက်များမူးယစ်ဆေးသောမူလတန်းအကြောင်းရင်းများ, တစ်နည်းအတွက်ကျူးကျော်မြှင့်တင်ရန်နှင့်ခိုင်မာစေရန်၎င်း၏စွမ်းရည်သည်၎င်း၏အလွန်အမင်းအစွမ်းထက်အန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်လည်းတိုက်လေယာဉ်များ, တိုက်ခိုက်ရေးအားကစားသမားများ, တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအားကစားသမားများ, တစ်လူကြိုက်များရွေးချယ်မှုပါပဲအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုမြင့်မားဖို့အသုံးပြုလျက်ရှိသောသူတို့ကိုအဘို့, အဲဒါကိုက၎င်း၏ဆိုးကျိုးများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်အလွန်သိသာင်; ဒီကမယုံနိုင်လောက်အောင်အသုံးဝင်နှင့်လက်တွေ့စေသည်။ လူကြိုက်များယုံကြည်ချက်ဆန့်ကျင်အများစုဟို steroids ကျူးကျော်တိုးမြှင့်ကြပါဘူး။ သေချာတာပေါ့, သူတို့ကအာရုံကိုတိုးမြှင့်နှင့်ပိုပြီးအာရုံစိုက်နှင့်လှုံ့ဆျောမှုမှအဓိကဦးဆောင် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်မြှင့်တင်ရန်, ဒါပေမယ့်အဖြစ်ဝေးတိုက်ခိုက်, အမျက်ထွက်ကျူးကျော်အဖြစ်အနည်းငယ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ Miberlorone ရှိကြောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ ကျူးကျော်ဖြစ်စေ, အဘယ်သူမျှမအားဖွငျ့မကောင်းတဲ့အရာဖြစ်၏။ သင်တစ်ဦးအဆင့်ကိုခေါင်းနှစ်လုံး, တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဆိုရင်သင့်လျော်စွာအသုံးပြုသောအခါ, သငျသညျကျူးကျော်များ၏အကြီးအအသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကမကောင်းတဲ့သဘောထားကိုရှိပါတယ်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ကသူတို့ကိုပေးရသို့မဟုတ်သူတို့ကို Mibolerone (drop Check) ကိုသုံးခွင့်ပြုထားတဲ့ပညာမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
မည်သူမဆိုမူးယစ်ဆေးဝါး၏ဤမျိုးကိုသုံးပါလိမ့်မယ်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ဦးရန်ပွဲသို့မဟုတ်ပြိုင်ပွဲအချို့နဲ့အခြားအတိုပေါကျကှဲ, လိုအပ်ကြောင်း-to-get-psyche-Up အမျိုးအစားမှတက်ဦးဆောင်သိမြင်မှုအာရုံနှင့်ကျူးကျော်တိုးမြှင့်၏ရည်ရွယ်ချက်, တဖန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအလွန်ဘုံအားကစားသမားများအားကစားရုံ၌ သာ. ရန်လိုအရတစ်ဦးရန်ပွဲအထိဦးဆောင်သည့်မူးယစ်ယူမယ့်, ဒါပေမယ့်ကာယဗလတစ်သိမြင်မှုရှုထောင့်ကနေသူများနောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်ကတဆင့်ရမယ့်ပြိုင်ပွဲအစားအသောက်များတွင် prep ရဲ့အဆုံးမှာအသုံးပြုရန်ပါလိမ့်မယ်။ တွင် ကာယဗလ, prep အလွန်ခက်ခဲသည်, ကြိမ်အပြင်းထန်ဆုံးရလေ့ရှိရာသူတို့အားနောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်ထဲမှာရှိတပြီးခဲ့သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွန်းအားပေးများအတွက်လိုအပ်အမြဲဖြစ်တယ်, Mibolerone (drop Check) ထိုသူတို့အဘို့ထိုသို့ပွုနိုငျသညျ။ ဒါဟာ၏စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုမှုသို့သော်အချို့သောမွှေးကြိုင်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်, ဒါကြောင့်ရေ retention ကိုဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိပြုသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့် prep ဒါစိန်ခေါ်မှုစေအခြားရှုထောင့်မှနှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးသဘောတူညီမှုအဖြစ်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူးနိုင်တစ်ခုခုဖြစ်ပါသည်, ကဆိုသည်။
သီအိုရီများတွင် Mibolerone (drop Check) အချို့အစွမ်းထက်ဟိုဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်မယ်လို့တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကြောင့်သင်၏ကျန်းမာရေးအဘို့ဖြစ်၏ဘယ်လောက်အန္တရာယ်များများကြောင့်အဓိကအားကြောင်းကိုရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲဖို့လုံးဝသဘာဝကျပါတယ်။ သူကပြောပါတယ်, တစ်စုံတစ်ဦးကဖွင့်တကယ်ကဤမျှလောက်များစွာသောအခြားနည်းလမ်းနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်အန္တရာယ်ပေးသောယူရန်အတွက်သာအကြောင်းပြချက်ကြောင်း, တဖန်ကျူးကျော်များ၏ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ယူနဲ့ off အများကြီး သာ. ကောင်း၏။
အစားအတိုဖြစ်သော Mibolerone (drop Check)4နာရီ (mibolerone တစ်ဝက်ဘဝ) ၏တစ်နှစ်ခွဲ-ဘဝရှိသည်, (ထိုမူးယစ်ဆေးနှင့်၎င်း၏ဆိုးကျိုးများအသုံးပြုသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စွန့်ခွာထားတဲ့ပြီးနောက်အချိန်) ။ အားကစားသမားကြိုတင်သူတို့ကထပ်တိုးတောင်းမည်သောအချိန်က 20 မိနစ်ပဲ 30 မိနစ်ကိုသုံးပါရန်အကြံပြုဘယ်ကြောင့်ဒီဖြစ်ပါသည်။
6 ။ Mibolerone သံသရာ
အခြား steroids နှင့်အတူဘုံဖြစ်ပါသည်တူသောအားကစားသမားတစ်ဦး "သံသရာ" (mibolerone သံသရာ) တွင်စစ်ဆေးမှုပေါက်သုံးပြီးဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်ရင်သို့ရာတွင်သို့မဟုတ်မည်သည့်စစ်မှန်သောသက်သေအထောက်အထားမရှိပါ။ ဒါဟာ Steroid တစ်မျိုးတိုးပွားလာကျူးကျော်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှု drive ကိုအဘို့ရှေးခယျြမှု၏ Pre-ဖြစ်ရပ် Steroid တစ်မျိုးအဖြစ်အစိုင်အခဲပြောဆိုချက်ကိုအကူတိုင်များစိုက်ထူထားပြီးပုံရသည်။ သို့သော်ကြွက်သားထုထည်မစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအကျိုးအမြတ်ကြောင့်ကသေးငယ်တဲ့ mibolerone ဆေးများအတွက်တိုတောင်း2ရက်သတ္တပတ် span သာသုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီမူးယစ်ဆေးအပေါ်အောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ ပေါ်မှာမဆိုပိုပြီးအချိန်, ဒါမှမဟုတ်လေးလံထိုး, နှင့်ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအံ့ဆဲဆဲဖြစ်ကြသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးအတို mibolerone တစ်ဝက်ဘဝ features ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Mibolerone လေ့တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်မှုမပြုမီ 30 မိနစ်အကြောင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီဆေးဝါးကိုယူပြီး၏ mode ကိုလျှာအောက်မှာ Mibolerone တစ်တက်ဘလက်အားမရကြောင်း sublingual စားသုံးမိပါသည်။ အသုံးပြုမှုဤနည်းချက်ချင်းကျူးကျော်နှငျ့ခှနျအားတိုးရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါး၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်.4နာရီ, ထို့နောက်ပစ္စည်းဥစ္စာလူ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေဖယ်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်အတွက်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဘုံ mibolerone သောက်သုံးသောလေ့ကျင့်ရေးသို့မဟုတ်ယှဉ်ပြိုင်မှု၏အရေးပါသောအခိုက်မတိုင်မီ5မိနစ်ကိုယူသင့်ကြောင်း Mibolerone ၏အကြောင်းကို 30 MGS ဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်, ဒီမူးယစ်ဆေးကိုအခြားကုစားနှင့်အတူ stacking မရှိဘဲ, တစ်ဦးတည်းအဘယ်သူမျှမ mibolerone သံသရာခေါ်ဆောင်သွားသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်အခြားများစွာသောမတူပဲ ဟိုမူးယစ်ဆေးဝါးများ, Mibolerone (ပေါက် Check) တစ်သံသရာစဉ်အတွင်းအသုံးပြုကြသည်မဟုတ်။ ဒါဟာကျူးကျော်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှု drive ကိုအားကောင်းစေသည်တစ်ခုသာ Pre-ဖြစ်ရပ် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အနိမ့် mibolerone ဆေးညွှန်း၏တစ်ဦးကရေတိုသင်တန်းကြွက်သားထုထည်မရှိသောရရှိမှုများအတွက် Mibolerone သုံးပြီးပါစေ။ အခြားဘက်ခြမ်းတွင်, ကြာကြာသို့မဟုတ်မြင့်မားသော mibolerone ဆေးညွှန်းထဲမှာယူပြီးကျန်းမာရေးပြဿနာများမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ Mibolerone ဝက်ဘဝကိုအတော်လေးတိုတောင်းသည်အတိုင်း, မူးယစ်ဆေးယှဉ်ပြိုင်မှုမပြုမီ 30 မိနစ်ကိုယူရပါမည်။
သင်အမှန်တကယ်ကဒီဆေးဝါးကိုယူဖို့လိုအပ်လျှင်သင်မှာကြှနျုပျတို့၏ website မှာအွန်လိုင်း mibolerone ဝယ်နိုင် www.aasraw.comဒါပေမယ့် Mibolerone ရဲ့အဆိပ်အရေးယူမှုလျှော့ရန် hepatoprotectors ယူဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။
8 ။ Mibolerone ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ
Mibolerone ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမြောက်မြားစွာရှိပါသည်။ ဒီအစဉ်အဆက်ကိုဖန်ဆင်းအာဏာအရှိဆုံး Steroid တစ်မျိုးနှင့်အန္တရာယ်အရှိဆုံးဟို steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ mibolerone ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကဒီမည်သူမဆိုအစဉ်အဆက်ကယ့်ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်တဲ့ Steroid တစ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါခွန်အားဖြစ်ကြ၏ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အတော်ကြာပိုကောင်းရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ တစ်ဦးရန်ပွဲသွေးဆောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အန္တရာယ်များကိုယေဘုယျအားဖြင့်ဤသူ Steroid တစ်မျိုးနှင့်အတူဆုလာဘ်ထင်ရှားသောလိမ့်မယ်ရှေ့တော်၌ထိုတိုးလာကျူးကျော်ပြောကြပါတယ်။ .Mibolerone ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပါဝင်နိုင်ပါသည် (သူတို့လုံးဝရှောင်ကြဉ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး) ဒါကတစ်ဦးချင်းသေဆုံးပါလိမ့်မယ်မဆိုလိုပါ, နှင့် mibolerone ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုဒီဂရီမှရှောင်ကြဉ်ခံရဖို့အဘို့အဖြစ်နိုင်သည်:
Mibolerone ခန္ဓာကိုယ်က aromatized သည်, ကြောင့် 7,17-dimethylestradiol (မြင့်မားသောဇီဝလှုပ်ရှားမှုနဲ့အီစထိုဂျင်) မှ၎င်း၏ပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုမြင့်မားအီစထိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးစဉ်းစားသည်။ Gynecomastia ပုံမှန်ကုထုံးဆေးများထက်ပိုမိုမြင့်မားအသုံးပြုကြသည်အထူးသဖြင့်အခါ, ဆေးကုနေစဉ်တစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းရေ retention ကိုမှာနှစ်ဦးစလုံးအရေပြားအောက်ဆုံးရေ retention ကိုများနှင့်အဆီအဆင့်ဆင့်တည်ဆောက်အဖြစ်ကြွက်သားချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်များ၏ထူးဆန်းသောဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့အီစထိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုရှောင်ရှားရန်, ထိုသို့သောNolvadex®အဖြစ် anti-အီစထိုဂျင်သုံးစွဲဖို့လိုအပ်သည့်ဖြစ်နိုင်သည်။ တဦးတည်းတနည်းအီစထိုဂျင်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ပိုပြီးထိရောက်ဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်သောArimidex® (anastrozole) များကဲ့သို့တစ်ဦး aromatase inhibitor သုံးနိုင်ပါသည်။ Aromatase inhibitors, သို့သော်, စံအီစထိုဂျင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုထုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်လေးစျေးကြီးဖြစ်နိုင်ပြီး, အသွေးကိုသောက် lipids အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်ပါသည်။
ဒါဟာ mibolerone လည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစ်ဦး progestin အဖြစ်ခိုင်မာတဲ့လုပ်ဆောင်မှုဖော်ပြပေးသောမှတ်ချက်များဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကချို့ယွင်းနှင့်အတူသက်ဆိုင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်အဆီသိုလှောင်မှုတိုးမြှင့်မှုနှုန်း၏အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်တားစီးအပါအဝင်, အီစရိုဂျင်၏သူတို့အားဆင်တူသည်။ Progestins လည်း mammary တစ်ရှူးတိုးတက်မှုနှုန်းအပေါ်အီစရိုဂျင်၏ stimulatory အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးပွား။ ထိုကဲ့သို့သောကြောင်း gynecomastia ပင်အလွန်အကျွံအီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခြင်းမရှိပဲ progestins ၏အကူအညီဖြင့်ပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်, ဒီမှာကဤနှစ်ခုကိုဟော်မုန်းအကြားခိုင်မာသော Synergy ရှိပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါရဲ့အီစထိုဂျင်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ထားတဲ့ anti-အီစရိုဂျင်၏အသုံးပြုမှုကိုမကြာခဏ mibolerone ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ gynecomastia လျော့ပါးရန်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
mibolerone ၏အန်ဒရိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအထီးပုံစံဆံပင်ကိုရိတ်ဖို့ predisposed ယောက်ျားအတွက်ဝက်ခြံ, ခန္ဓာကိုယ်ဆံပင်တိုးတက်မှုနှင့်ဆံပင်ကျွတ်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ mibolerone ၏အန်ဒရိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအမျိုးသမီး virilization လက္ခဏာတွေလည်းပါဝင်နိုင်ပါသည်; တကယ်တော့အချို့အဆင့်မှာ virilization နီးပါးစိတ်ချစွာဖြစ်ပါတယ်။
အထီးအသုံးပြုသူမျိုးရိုးဗီဇများအတွက်အန်ဒရိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏ပြင်းထန်မှုဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဟော်မုန်းရဲ့အန်ဒရိုဂျင် Finasteride နဲ့တူနေတဲ့ 5-alpha-reductase inhibitors ၏အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချမရနိုငျမှတ်သားဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်; သူတို့သည်နောက်အသုံးပြုမှုကိုရပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့နှလုံးသွေးကြောစနစ်ကဖျက်ဆီးဖို့အဆိုးဆုံးနညျးလမျးတစျခုမှာ Mibolearone ယူခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကိုသင်ယူတဲ့အခါမှာသူတို့အိမ်ခေါင်မိုးကတဆင့်သွားပါကသင်၏လက်စထရောအဆင့်ကို, အထူးသဖြင့်သင့်ရဲ့မကောင်းတဲ့လက်စထရောကိုလုပ်မယ့်နေကြသည်။ ဒါဟာအစရှိပြီးသားနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာပြဿနာများကိုအများကြီးပိုဆိုးစေမယ်။ Mibolearone တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါစိတ်ထဲတွင်ဤသူအပေါင်းတို့ထားပါ။ သငျသညျအိုမီဂါဖက်တီးအက်ဆစ်ကိုစာရေးတံ, နည်းပါးလာရိုးရှင်းသောကြားနှင့်နည်းပါးလာပြည့်နှက်ဆီဆိုလိုတယ်, ကောင်းသောနှလုံးသွေးကြောကျန်းမာရေးကိုထောကျပံ့တဲ့အစားအစာကိုစားခြင်းခံရသင့်ပါတယ်။ ဘေးဖယ်ကောင်းမွန်သောအစားအသောက်အလေ့အထကနေ cardio အလေးပေးထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လည်းအရေးကြီးပါသည်။ သင်ရုံဖော်ပြထားသောဖော်ပြချက်ကိုက်ညီသောတစ်စုံတစ်ဦးရောက်နေလျှင်, သင် Mibolearone အတူပဲဒဏ်ငွေဖြစ်သင့်သည်။
သင်တစ်ဦးကယ့်ကိုဆင်းရဲသောသူသည်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာပရိုဖိုင်းနှင့်အတူတစ်ယောက်ယောက်ကိုနေလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ဤသင်ရုံယူပြီးမကြိုးစားသင့်ကြောင်းအခြားမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အမှု၌သင်တို့သည်လည်းရိုးရှင်းစွာအသုံးပြုတဲ့အခါသင့်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်း၏အားလုံးဖုံးလွှမ်းကြသည်ကို double-စစ်ဆေးတစ်ဦးဓါတ်တိုးဖြည့်စွက်ယူနိုင်ပါတယ်။
Mibolerone တစ် c17-alpha-alkylated ဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအပြောင်းအလဲတချို့ခံတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါသွေးကြောထဲသို့မူးယစ်ဆေး entry ကိုတစ်ဦးအလွန်မြင့်မားရာခိုင်နှုန်းခွင့်ပြု, အသည်းအားဖြင့် Deactivate ကနေမူးယစ်ဆေးကိုကာကွယ်ပေးသည်။ C17-alpha-alkylated ဟို / အန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက် hepatotoxic နိုင်ပါတယ်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာသို့မဟုတ်မြင့်မားသောထိတွေ့အသည်းပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်။ ရှားပါးဖြစ်ရပ်အတွက်အသက်အန္တရာယ်ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာအသည်း function ကိုနှင့်ယေဘုယျကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီသံသရာကာလအတွင်းအခါအားလျော်စွာဆရာဝန်တစ်ဦးသွားရောက်အကြံပြုလိုတယ်။ c17-alpha-alkylated steroids ၏စားသုံးမှုအသည်း strain မြင့်တက်ရှောင်ရှားရန်ကြိုးပမ်းအတွက် 6-8 ရက်သတ္တပတ်မှလေ့ကန့်သတ်သည်။ ပြင်းထန်အသည်းပြဿနာများအထူးသဖြင့်အမြင့်ဆုံးကြိမ်နှင့် / သို့မဟုတ်တာရှညျအုပ်ချုပ်မှုကာလနှင့်အတူ, ဒီ Steroid တစ်မျိုးနှင့်အတူဖယ်ထုတ်လိုက်မရနိုင်ပေမယ့်လူအများစုက, ပါးစပ်ဟို / အန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက်ကိုအသုံးပြုဖို့ရာအတွက်သည် Periodic သဘာဝပေးသောရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ အမေရိကန် mibolerone များအတွက်သတင်းအချက်အလက်မညွှန်ကြား mibolerone အပေါ်ဆောင်ရွက်နေတစ်ဦးတည်းသာလူ့လေ့လာမှုဖျောပွထားသဖြင့်, လေ့လာမှုကြောင့်မြင့်မားတဲ့ hepatotoxicity စောစောရပ်စဲခံခဲ့ရကြောင်းကိုသတိပြုပါ။
မည်သည့် hepatotoxic ဟို / အန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက်ကိုယူပြီးနေစဉ်ထိုကဲ့သို့အသည်းတည်ငြိမ်မှု, Liv အဘိဓါန်-52, ဒါမှမဟုတ် Essentiale Fort အဖြစ်အသည်း detoxification ဖြည့်စွက်၏အသုံးပြုမှုကိုအကြံပေးသည်။
Mibolerone ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး-testosterone တားစီး:
Mibolerone သည်အလွန်သဘာဝက testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုဖိနှိပ်။
အမျိုးသမီးတွေအတွက် -Vaginal လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် clitoral ပျတိုး
ဖွစျပွီး myocardial infarction ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေ
ဖွစျပွီးဆိုးရွားစွာ triglyceride အပေါ်သက်ရောက်မှု
ဖွစျပွီးကိုအလွန် endothelial အပန်းဖြေလျော့နည်းစေ
9 ။ Mibolerone ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ပေါက် Check, ဓာတုနာမကိုအမှီ mibolerone, CAS No.3704-9-4, မူလကအပူသို့သွားရာမှအမျိုးသမီးခွေးစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်အကူအညီအဖြစ်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ နည်းပညာပိုင်းကထည့်သွင်းစဉ်းစားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို dogs.In တကယ်တော့သူ့ရဲ့သက်ရောက်မှုများအတွက်ယန္တရားဖြစ်ပါတယ်အန်ဒရိုဂျင်, သို့သော်, mibolerone လည်းအလွန် progestational ဖြစ်သောဖြစ်ပါတယ်, mibolerone အဓိကချို့ယွင်းသူ့ဟာသူအဖြစ်အဓိကချို့ယွင်းအဲဒီ receptor ဘို့အကြောင်းကိုနှစ်ကြိမ်ဆှဖှေဲ့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးအစုလိုက်အပြုံလိုက်မရရှိစနှင့်အကြီးအကျယ်တိုးပွားလာကျူးကျော်များအတွက်အသုံးဝင်သောဟာအလွန်အစွမ်းထက် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ဂုဏ်သတင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေး bolasterone ၏မဟုတ်သလို-19 ဆင်းသက်လာသည်နှင့် nandrolone testosterone ဟော်မုန်းထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်ပြီးပို progestational သည်အတိုင်း, ဒါ bolasterone နှိုင်းယှဉ် mibolerone နှင့်အတူအမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကို C-7 မှာမီသိုင်းအုပ်စုတစ်စု၏ထို့အပြင် AR နှင့် PR စနစ်လုပ်ဆောင်မှုတိုးပွါးဒါပေမယ့်လည်းမော်လီကျူး၏အဆိပ်အတောက်ကိုတိုးပွားစေမသာ။ Mibolerone nortestosterone (nandrolone) ၏ဆင်းသက်လာဖြစ်၏ သို့သော်ထိုသို့ 7-alpha-methyl အုပ်စုတစ်စု၏ဒိုင်းလွှားသက်ရောက်မှုကြောင့်တစ်ဦးလျော့နည်းအစွမ်းထက် dihydronandrolone metabolite မှ metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက်ပေးမထားပါ။
Mibolerone အနေနဲ့အလွန်အမင်းအချိန်တိုအတွင်း span အတွက်လိုချင်သောရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်သောအာဏာအရှိဆုံး Steroid တစ်မျိုးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား။ သို့သော်ဤ Steroid တစ်မျိုးအချိန်ကန့်သတ်အတွင်းနှင့်သင့်လျော်သောထုံးစံ၌, လက်ျာသောက်သုံးသောပမာဏအုပ်ချုပ်မှသာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။
mibolerone ဆေးညွှန်းလက်တွေ့ကျတဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်ကျယ်ပြန့်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနအောက်ပါဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအားလုံးအတွက်, ထုတ်ကုန်စစ်မှန်သောနှင့်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကြီးမြတ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုနှင့်အတူအသုံးပြုသင့်ပါသည်။
10 ။ Mibolerone အွန်လိုင်း Buy
AASraw Upjohn ထုတ်လုပ်ရပ်တန့်သောကြောင့်စစ်ဆေးမှုနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်, အွန်လိုင်းရောင်းရန် mibolerone ပေး, အွန်လိုင်းစတီရွိုက်ကုန်ကြမ်းအမှုန့်အများအပြားမျိုးပေးမယ့်ကျော်ကြားစက်ရုံဖြစ်ပါသည်, ဤမျှလောက်များစွာသောမဟုတ်ပုလင်း (အားလုံးမှာမဆိုလျှင်) Upjohn ဖြင့်မူရင်းထုတ်ကုန်များ၏တည်ရှိ။ legit စစ်ဆေးမှု Drop အားဖြင့်လာရန်ခက်ခဲသော်လည်းမြေအောက်စျေးကွက်အတွင်းမှအမိန့်ချမှတ်နိုင် mibolerone ်ထုတ်ကုန်များ၏ပဒေသာမြေအောက်ဗားရှင်းရှိပါတယ်။ စျေးအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်ပေမယ့်, အဆုံး၌, မီလီဂရမ်နှုန်းမီလီဂရမ်ဒီ Deca Durabolin နှင့် Dianabol တူသောအခြားသူများအားနှိုင်းယှဉ်ပါကတော်တော်စျေးကြီး Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဤမျှလောက်များစွာသောမြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းအချောထုတ်ကုန်စေရန်အွန်လိုင်းရောင်းရန်ကုန်ကြမ်း mibolerone ကိုဝယ်ကြလော့။
Tags: Mibolerone အမှုန့်ကိုဝယ်, Mibolerone အမှုန့်
4326 Views စာ
Tykerb (231277-92-2) ရင်သားကင်ဆာ caner ၏ရတာဟာလူသတ်သမား	အွန်လိုင်း MAGL inhibitor JJKK-048 ပေးသွင်း